ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ ပြည့်စုံအောင် ~ pyidawoo
...ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြည့်စုံ ပြီးမြောက်အောင်~~~
...၁) အာရမ္ဘဝီရိယ- တစ်နေနေရာကနေ သယ်ဆောင်ယူလာသလို စရောက်လာ ရှိလာ ဖြစ်လာတဲ့ အစမှာဖြစ်တဲ့ ဝီရိယမျုိး။ ဒီဝီရိယက ဘုန်းကြီးတို. လူမျုိးတွေမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အဖြစ်များတယ် လို. ပြောကြပေမယ့် တကယ်တော့ လူတိုင်းရှိကြတဲ့ အဖြစ်များကြတဲ့ ဝီရိယပါ။ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲတွေ.ရင် တွန်.သွားလို. ရေရှည်မခံလို ဟုန်းခနဲတောက်ပြီး ဝုတ်ခနဲငြိမ်းတဲ့ ကောက်ရိုးမီးလို လုံ.လမျုိးလို. တင်စား ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒီဝီရိယမျိုးနဲ.တော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြည့်စုံ ပြီးမြောက် အောင်မြင်ဖို. မဖြစ်နိူင်ပါဘူး။
၂) နိက္ကမဝီရိယ-ခါတွက်ထုတ်ပစ်သလို ဆန်.ကျင်ဘက်တွေကို တွန်းလှန်နိူင်တဲ့သတ္တိမျိုးနဲ. ပြည့်စုံတဲ. ကြံ.ကြံ.ခံတဲ့ ဝီရိယမျိုး။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အစလောက် ဘယ်ဟာမှ မနိမ့်ပါ မလွယ်ပါဘူး။ တက်လေ မြင့်လေ နက်လေ ခက်လေပါပဲ။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ တွန်.မသွားဘဲ အကြောက်တရားကို ကိုင်လှုပ် ခြောက်ခြားနိူင်တဲ့ အခက်အခဲကို ကြံ.ကြံ.ခံနိူင်တဲ့ ဒီ နိက္ကမဝီရိယဝီရိယမျိုးရှိမှ လုပ်သမျှကို ခရီးရောက်အောင်လုပ်နိူင်ကြမှာပါ။ ဒီဝီရိယမျုိး ကြတော့ ဘုန်းကြီးတို. လူမျိုးတွေမှာ သိပ်မရှိကြဘူး။ အဖြစ်နည်းတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် တစ်ခုခုကို ခရီး ရောက်အောင် လုပ်နိူင်တဲ့သူက လူနည်းစု ဖြစ်နေဦးမှာပါ။
၃) ပရက္ကမ ဝီရိယ- ရှေဆုံးက စဖြစ်လိုက်တဲ့ အာရမ္ဘဝီရိယကနေစ (ကောက်ရိုးမီးလို မဟုတ်ဘဲ) နောက်နောက် အစဉ်မပြတ် အဆက်မပြတ် တရစပ် အားထုတ်နိူင်တဲ့ ဝီရိယမျုိး။ စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်နိူင်တဲ့ သတ္တိရှိလို “စွဲ” လို. ပြောရာက “ဇွဲ” ဆိုတဲ့ စကားဖြစ်လာတယ်လို. ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီဇွဲဆိုတဲ့ ပရက္ကမ လုံ.လဝီရိယမျိုးအထိ ဝီရိယ သုံးမျိုးလုံး စုံမှ အရာရာ ခရီးရောက် ပေါက်မြောက် အောင်မြင်ကြမှာပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြည့်စုံအောင် ဝီရိယ သုံမျုိး အစုံဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
အာရမ္ဘ နိက္ကမ နဲ. ပရက္ကမ တဲ့ သုံးဖြာ
များသတ္တာ သိဒ္ဓိပြီးအောင် ပွားကြစေရာ
တို. အမျိုးသား ရွှေမြန်မာ
ကိုးကွယ်တာ ရတနာသုံး ပေမို.
စံပြုကာ နည်းယူမှီး ကြပါစို.ကွယ်~~~
ပွားစေရာ ဝီရီယ သုံး ကို